သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ leukoplakia - ကုသမှု
အတော်များများကယောဂီအဖြစ်ရောဂါနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ရောဂါအထူးကု သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ leukoplakia ရောဂါမျိုးပွားအသက်အရွယ်အမျိုးသမီးအကြားကျယ်ပြန့်သည်အတိုင်း, ။
Leukoplakia သားအိမ်ခေါင်း၏အင်္ဂါဇာတ်အဘို့ကိုဖုံးအုပ် keratinized epithelium ဇုန်ပေါ်မမှန်ကောက်ကြောင်းနှင့်အတူအဖြူရောင် patch ကိုအဖြစ်ပုံပေါ်ပါတယ်။ အဆိုပါအစက်အပြောက်ချောမွေ့မျက်နှာပြင်သို့မဟုတ် papilliform နိုင်ပါသည်။
ရောဂါပြန့်ပွား၏အဆင့်မြင့်နေသော်လည်းသားအိမ်၏ leukoplakia ၏ကုသမှုတစ်ခုစုစည်းချဉ်းကပ်မှုမဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ဦး precancerous ခွအေနအေဖြစ်ပါသည် - တလက်ပေါ်မှာဤရောဂါဟာနောက်ခံဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်အခြားအပေါ်ထားလို့ဖြစ်ပါတယ်။
Leukoplakia (ကင်ဆာကျိတ်များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအထောက်အကူဖြစ်စေကြောင်းဖွဲ့စည်းခဲ့ atypical ဆဲလ်) ရိုးရှင်းပြီး proliferating ဖြစ်ပါတယ်။
မည်သည့်ကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ leukoplakia ၏ကုသမှုအဆိုပါရောဂါဗေဒအာရုံ၏ပြီးပြည့်စုံဖျက်သိမ်းရေးရည်ရွယ်သည်။
ထိုခဏခြင်းတွင်ကရိုးရာကုစားမဖြစ်နိုင် leukoplakia ကုသပေးဖို့ကြောင်းမှတ်သားရပါမည်။ ကုသမှုအနီးကပ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကြီးကြပ်မှုအောက်တွင်ရှိသင့်သည်။
ကွဲပြားခြားနားသော tampons နှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၏ douching decoction ၏အသုံးပြုမှုကိုသာအခြေအနေကိုပိုမိုဆိုးရွားများနှင့်ပြဿနာများများစွာဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
ရောဂါကုသမှု၏နည်းလမ်းရဲ့ရွေးချယ်မှုရောဂါဗေဒအမျိုးအစား, ဘေးဒဏ်သင့်ဒေသသို့၏အရွယ်အစား, အသက်အမျိုးသမီးတွေပေါ်တွင်မူတည်သည်။
သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ leukoplakia ၏ကုသမှုများအတွက်လူငယ်တစ်ဦးနှစ်အရွယ်မှာရေဒီယိုလှိုင်းများနှင့်လေဆာကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းနှစ်များတွင် ပို. ပို. radiosurgery ကန်တော့ချွန်ခန္နှင့် diatermoelektrokonizatsiya ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
လေဆာခဲအလွန်အကျွံသွေးထွက်ခြင်းနှင့် strupoobrazovaniya ဖြစ်ပေါ်စေပါဘူးတဲ့လုံခြုံပြီးရိုးရှင်းတဲ့နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ မေ့ဆေးမပါဘဲ leukoplakia လေဆာပြင်ပလူနာ 4-7 နေ့ကသံသရာ၏ဖယ်ရှားရေး။
သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ leukoplakia ၏ Radiowave ကုသမှုဖြတ်တောက်နှင့်ကြိမ်နှုန်းမြင့်လှိုင်းခွဲစိတ်လျှပ်ကူးပစ္စည်းအားဖြင့်ထုတ်ပေးကြောင်းအပူ၏တစ်သျှူးများ၏ခဲများအတွက်အသုံးပြုမှုကိုပါဝင်ပတ်သက်။ ရေဒီယိုလှိုင်းတံပိုး၏လျှောက်လွှာပြီးနောက်အနာရောဂါငြိမ်းစရာအများကြီးပိုမြန်ရာအရပ်ကိုကြာအနာ။
ဤအမှုနည်းလမ်းများအပြင်လည်းအသုံးပြုကြသည်: cryosurgery , ဓာတုခဲ, electrocoagulation ။ သို့သော်အမျိုးသမီးအင်္ဂါဟု၏ဤရောဂါဗေဒ၏တွေ့ရှိရပါသည်အာရုံစိုက် leukoplakia ကုသမှု၏ဖယ်ရှားရေးကန့်သတ်သည်မဟုတ်။ ဒါဟာပဋိဇီဝဆေးကုထုံး, ဟော်မုန်း, immunostimulant, microbiocenosis မှန်ကန်သောကုသမှုအားဖြင့်ဖြည့်ဆည်းရပါမည်။
Follicular သားအိမ် cyst - ကုသမှု
Endometriosis - လက္ခဏာများ
ရင်သားကင်ဆာဖော - အကျိုးဆက်များ
ဆား diathesis ကျောက်ကပ်
Self-တင်ဆက်မှု - တစ်မူရင်းနှင့်ထိရောက်သောအတွက်သူတို့ကိုယ်သူတို့ကိုတင်ပြဖို့ဘယ်လို?
ကိုယ်ဝန်အတွက် Doppler ultrasound - ကဘာလဲ?
ပါကင်ဆန်ရောဂါ - ပထမလက္ခဏာတွေသတိထားမိဖို့ဘယ်လိုနှင့်နောက်မျှော်လင့်ဘာလဲ?
ဒါကြောင့်ရပ်ကြီးမဟုတ် bug တွေအဖြစ်, ပဲသိမ်းထားဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
စာရွက် - "တစ်ဦးသားမွေးကုတ်အင်္ကျီအောက်မှာ" သုပ်
အိုက်စလန် - ဆွဲဆောင်မှုများ
တစ်ဦးဇစ်နှင့်အတူအင်္ကျီကို - ဤရာသီ၏ 44 အပူဆုံးမော်ဒယ်များ
အနီရောင်ဘောင်းဘီ - အဘယ်အရာကိုဝတ်ဆင်ရန်နှင့်မည်သို့ဖန်စီလေးဖန်တီးနည်း
Hematocrit တိုးမြှင့် - ကဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာနှင့်အသွေးကိုပြည်နယ်ကိုထိန်းညှိဖို့ဘယ်လို?
လိမ္မော်ရောင် sorbet - စာရွက်
အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ဆီလီကွန် bakeware ရှိမရှိ?